के तपाईंको साइट, ब्लग, वा फीड जियोट्याग छ? | Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 23, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
साइटहरू फेला पार्ने एक राम्रो तरिका भौगोलिक रूपमा छ। मैले वास्तवमा फेला पारे कि मेरो साथीको कामको ब्लग रहेको छ उसलाई नक्शामा पत्ता लगाएर। त्यहाँ बाहिर धेरै वेब साइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो ब्लगको स्थान वा साइट स्थान यो भौगोलिक निर्देशांक द्वारा पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईले वास्तवमै तपाईको साइटमा केहि मेटा ट्यागहरू जोड्न आवश्यक पर्दछ।
म यो केहि समयको लागि गर्न चाहेको छु, तर वास्तवमै त्यहाँ मेरो लागि ट्याग निर्माण गर्न त्यहाँ एक सरल उपकरण थिएन ... अहिले सम्म! आज राती मैले सुरुवात गरेको छु ठेगाना फिक्स.
साइट ठेगानाहरू सफा गर्न, तपाईंको अक्षांश र देशान्तर फेला पार्न र स्वचालित रूपमा उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जियोट्यागहरू तपाईंको वेबसाइट, ब्लग र / वा तिनीहरूको लागि आरएसएस फिडहरू।
यहाँ एक पूर्वावलोकन छ:
तपाईको वेबसाइट वा ब्लगको हेडरमा मेटा ट्यागहरू प्रतिलिपि गर्नुहोस् र तपाईंको अन्य मेटा ट्यागहरू टाँस्नुहोस्। आशा छ तपाईंलाई यो मनपर्‍यो!
फिडप्रेस तपाइँको RSS फिड जियोट्याग गर्न पनि अनुमति दिन्छ। तपाईं अनुकूलन अन्तर्गत फीडबर्नरमा तपाईंको अक्षांश र देशान्तर प्रतिलिपि गर्न र टाँस्न सक्नुहुन्छ - तपाईंको फिडलाई जियट्याग गर्नुहोस्।
23 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 11:23 बजे
राम्रो विचार - राम्रो कार्यान्वयन। समय कहाँ खोज्ने !
23 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 11:26 बजे
धन्यवाद, RoudyBob। मेरा बच्चाहरू क्रिसमसको लागि तिनीहरूको आमामा छन्... जसले स्नातक डग र उसको कम्प्युटर छोड्छ! मसँग यस्ता धेरै परियोजनाहरू छन् जुन सुरु भएका थिए र कहिल्यै समाप्त भएनन्। यो एक उत्पादक हप्ता हुनेछ!
डिसे 24, 2006 मा 12: 44 AM
ठिक छ। धेरै राम्रो। धन्यवाद।
डिसे 24, 2006 मा 1: 53 AM
डिसे 24, 2006 मा 11: 48 AM
म सधैं पढ्छु र यसको बारेमा सोच्दछु, तर कहिले पनि यो गरेको छैन। एक राम्रो विचार र एक राम्रो उपकरण।
24 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 12:01 बजे
मैले गुगलको ट्रयाक राखेको छु। विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, तिनीहरूका नक्साहरू बेटा छन्। यदि तपाइँ यसबाट एक एप्लिकेसन निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ र अप-टाइमको ग्यारेन्टी छ भने, तिनीहरूले इन्टरप्राइज इजाजतपत्र संस्करण प्रस्ताव गर्छन्।
मैले गत वर्ष माउन्टेन भ्यूमा उनीहरूका केही टोलीसँग भेट गरें र यस प्रकारका उपकरणहरू हेर्न मन पराउँछन् त्यसैले म यसको बारेमा धेरै चिन्तित छैन। यो होइन कि म हिट संग उनको थ्रेसहोल्ड हिट गर्न जाँदैछु!
CSS को लागि, मैले त्यहाँ IE मात्र CSS ह्याक गरें। यो सबै राम्रो छ। मलाई थाहा छ त्यो उत्तम विधि होइन, तर IE यति नराम्रो छ कि म वास्तवमै यसमा धेरै प्रयास गर्दिन। मलाई थाहा छ कि दर्शकहरू हराउन सक्छन् ... तर ओह राम्रो।
25 डिसेम्बर, 2006 बेलुका 11:46 बजे
अपडेट: मैले केही बगहरू फिक्स गरें जुन कुनै डाटा बिना केही विदेशी ठेगानाहरू फर्काउँदै थिए। मसँग अझै पनि क्यानाडामा शहर फिर्ता गर्ने समस्या छ तर म यसमा काम गर्दैछु!
जनवरी 3, 2007 6:20 बजे
जनवरी 5, 2007 मा 11: 42 एएम
द्वारा छोड्न र आफ्नो साइट मा सूचीबद्ध गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् http://www.gmapsdirectory.com
जनवरी 5, 2007 7:39 बजे
धन्यवाद, ब्रायन! मैले आज राती मात्र राखेको छु!
जनवरी 10, 2007 मा 9: 20 एएम
नर्वेमा मेरो ठेगानाको साथ यो प्रयास गरे, र केवल "माफ गर्नुहोस्" सन्देश प्राप्त भयो। रमाईलोको लागि मैले केवल "नर्वे" प्रविष्ट गर्ने प्रयास गरें। नतिजा आउँदा हाँस्नै पर्यो 🙂
धन्यवाद! (र त्यहाँ कुनै व्यंग्य छैन!)
जनवरी 27, 2007 12:49 बजे
उत्तर अमेरिकाको लागि राम्रो, तर बेलायतलाई समर्थन गर्दैन।
UK को लागि अर्को जियोकोडर प्रयोग गर्न सक्छ जुन काम गर्दछ
जनवरी 27, 2007 1:08 बजे
धन्यवाद, mapperz... र उत्कृष्ट साइट! के तपाईलाई इमाड जियोकोडिङ इन्जिन प्रयोग गर्नका लागि कुनै सीमितताहरू थाहा छ? यो कसरी जान्छ हेर्न म यसको साथ बीटा परीक्षण गर्न सक्छु। यसले कार्यक्षमतालाई पनि बृद्धि गर्दछ किनकि मसँग धेरै तरिकाहरू (फोन, इत्यादि) मार्फत प्रयोगकर्ताहरू सोध्न सक्छु।
जनवरी 27, 2007 1:40 बजे
सीमाहरू स्रोत स्पष्ट गरिएको छैन। तर जाँच गरेको छ कि डाटा क्राउन प्रतिलिपि अधिकार छैन (कोडपोइन्ट (पोष्टकोड डाटा) र ठेगाना बिन्दु जाँच गरेर।
यो यूके भर मा लगभग 93% सही छ।
के तपाइँसँग RSS फीडहरूको कुनै उदाहरण छ?
यसमा georss (.xml) थप्ने प्रयास गरियो
BBC Weather RSS मा काम गर्नुहुन्छ
जनवरी 27, 2007 4:44 बजे
मलाई विश्वास छ कि यो केस संवेदनशीलता मुद्दा थियो ( बनाम )। मैले कोड परिमार्जन गरेको छु त्यसैले यो सबै छ
मार्क्स 11, 2007 मा 7: 02 PM
के म मात्र हुँ वा मैले मार्कर सार्दा KML स्निपेट अपडेट हुँदैन?
यो बाहेक अरू कुनै पनि: राम्रो विचार र धेरै उपयोगी कुरा। म यसलाई धेरै गुगल नक्साका लागि बहुभुज तहहरू (जस्तै ह्यान्ड-कोडिङ LineString-elements) कोर्नका लागि धेरै दुरुपयोग गर्दैछु।
मार्क्स 11, 2007 मा 9: 01 PM
नमस्ते अज्ञानी !
मेरो ध्यानमा ल्याउनु भएकोमा धन्यवाद! यो अब तय भएको छ! तपाईले चाहानु भएको सबै दुरुपयोग गर्नुहोस्।
अप्रिल 1, 2007 मा 8: 14 PM
नमस्ते, मेरो नाम रायन Updike हो। म हाम्रो भूगोल कक्षामा KML सँग काम गर्ने Google Earth परियोजना गर्दैछु। के तपाई हामीलाई KML कोड को केहि बाहिर गर्न को लागी ठीक गर्न वा केहि कोड प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्षम हुनुहुनेछ? हामी कसरी पोइन्ट डाटालाई इनपुटको रूपमा कोड गर्ने, र त्यसपछि xml कोडमा आउटपुट खोल्ने प्रयास गर्दैछौं। तपाईंले दिन सक्ने कुनै पनि सल्लाह धेरै सराहना गरिनेछ। तपाईंको समयको लागि धन्यवाद।
अप्रिल 1, 2007 मा 10: 37 PM
पक्का, रायन! म तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछु। जाँच गर्नुहोस् यो पोस्ट साथै KML फाइलहरू प्रयोग गर्न। यो अब KML फाइलको साथ आफ्नो साइट निर्माण गर्न Google API मार्फत पहुँचयोग्य छ (केहि समयको लागि यो Google को म्यापिङ पृष्ठ मार्फत मात्र उपलब्ध थियो।
मई 11, 2007 मा 2: 38 एएम
हो, धेरै राम्रो पोस्ट। तर मलाई FeedBurner मन पर्दैन... र KML-फाइल के हो?
मई 11, 2007 मा 5: 57 एएम
नमस्ते पावल, तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको लेखमा KML फाइलहरू। यो मूलतया एक्सटेन्सिबल मार्कअप भाषा (XML) मा लेखिएको भौगोलिक-विशिष्ट फाइल हो। पोष्टमा नमूना पनि छ!
यो एक महान उपकरण हो। यो जस्तो जियोट्यागिङ उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो फेला पार्न राम्रो छ।
म चाहान्छु कि त्यहाँ जियोट्यागिङ प्रयोग गर्ने साइटहरूको डाइरेक्टरी थियो। कसैलाई सूची थाहा छ?
अक्टोबर 4, 2007 बिहान 7:12 बजे
त्यहाँ छ फीडम्याप। मैले धेरै समय मा साइटमा धेरै कार्य देखेको छैन, यद्यपि।
उत्तम उपकरण। मैले यसलाई म्यापि aboutको बारेमा सिक्न प्रयोग गर्‍यो। तपाईको समय र कामका लागि धन्यबाद।